သားလေးနိုဝာရဲ့ အသက် (၈) နှစ်ပြည့်မှာ တစ်သက်လုံးမှတ်သားထားသင့်တဲ့ ဆုံးမစကားတွေနဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဇာဏ်ခီ – Cele Snap
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးက လူကြီး၊ လူငယ် ပရိသတ်မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသား ဇာဏ်ခီကတော့ အသက်သုံးဆယ်ကျော်အရွယ်မှ အောင်မြင်လာခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ “ ဥပါယ်တံမျဉ် ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အကြီးအကျယ်ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာဏ်ခီကတော့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ အကယ်ဒမီဆုကြီးနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရပေမယ့် ယခု (၂၀၁၉) ခုနှစ်မှာတော့ “ ထာဝရနှောင်ကြိုး ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကယ်ဒမီရရှိနိုင်ဖို့ ပရီသတ်တွေက ထင်ကြေးပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင် သရုပ်ဆောင် မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇာဏ်ခီကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေသလို တစ်ဖက်မှာလည်း မိသားစုရဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးအဖြစ် တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေရသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့ကတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား ဇာဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီတို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသားလေး နိုဝါရဲ့ အသက် (၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာဏ်ခီကလည်း နိုဝါလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး မှတ်ထားသင့်တဲ့ ဆုံးမစကားတွေနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာကို အခုလိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ “ Happy Birthday ပါ သားရေ!! လူတိုင်းမှာ သူ့ခရီးနဲ့ သူရှိတယ် ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုတယ် ။ ဘဝကခက်ခဲတယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်နေစရာမရှိပါဘူး ”
“ မင်းအတားအဆီးများစွာကို ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်နဲ့ ဂရုဏာတွေ မလျော့အောင် သေချာလုပ်ပါ ။ ဘယ်လောက်ပဲ သေးမွှားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါစေ အသိအမှတ်ပြုပါ ။ အဲဒီ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် ပြည့်စုံတဲ့ ဘဝတစ်ခု မင်းရရှိလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သားမှတ်ထားရမှာက ငါက မင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်း ဖြစ်မှာပါ။ အဖေ သားကို နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ချစ်တယ် Noah. ❤️❤️❤️ ” ဟုဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
သရုပ်ဆောင် ဇာဏ်ခီကတော့ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေးကို ဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ် အခွင့်အရေးရရှိခဲ့တဲ့ သားလေး နိုဝါကို အသက်ထက်တောင် ပိုချစ်ရှာသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝါလေးလည်း မွေးနေ့ကစ ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပြီး ဖေဖေ၊ မေမေ အားကိုးထိုက်တဲ့ သားလိမ္မာလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ လို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..။
မွနျမာ တဈနိုငျငံလုံးက လူကွီး၊ လူငယျ ပရိသတျမရှေး ကွိုကျနှဈသကျအားပေးကွတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသား ဇာဏျခီကတော့ အသကျသုံးဆယျကြျောအရှယျမှ အောငျမွငျလာခဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ “ ဥပါယျတံမဉျြ ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးနဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ အကွီးအကယျြရရှိခဲ့တဲ့ ဇာဏျခီကတော့ ကံမကောငျးစှာနဲ့ အကယျဒမီဆုကွီးနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ရပမေယျ့ ယခု (၂၀၁၉) ခုနှဈမှာတော့ “ ထာဝရနှောငျကွိုး ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးနဲ့ အကယျဒမီရရှိနိုငျဖို့ ပရီသတျတှကေ ထငျကွေးပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျရှငျ သရုပျဆောငျ မငျးသားတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဇာဏျခီကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျနသေလို တဈဖကျမှာလညျး မိသားစုရဲ့ အိမျထောငျဦးစီးအဖွဈ တာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျနရေသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ..။
ဒီဇငျဘာလ (၉) ရကျနကေ့တော့ သရုပျဆောငျမငျးသား ဇာဏျခီနဲ့ ဒါရိုကျတာ ခရစ်စတီးနားခီတို့ရဲ့ တဈဦးတညျးသောသားလေး နိုဝါရဲ့ အသကျ (၈) နှဈပွညျ့မှေးနလေ့ေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဇာဏျခီကလညျး နိုဝါလေးရဲ့ မှေးနမှေ့ာ ဘဝတဈလြှောကျလုံး မှတျထားသငျ့တဲ့ ဆုံးမစကားတှနေဲ့ မှေးနဆေု့တောငျးပေးခဲ့တာကို အခုလိုပဲ တှရေ့ပါတယျ။ “ Happy Birthday ပါ သားရေ!! လူတိုငျးမှာ သူ့ခရီးနဲ့ သူရှိတယျ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ဟာကိုယျဘာဖွဈမလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုတယျ ။ ဘဝကခကျခဲတယျဆိုပမေယျ့ အဲဒါနဲ့ပတျသကျပွီး စိုးရိမျနစေရာမရှိပါဘူး ”
“ မငျးအတားအဆီးမြားစှာကို ရငျဆိုငျရလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ လမျးတဈလြှောကျမှာ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အခဈြနဲ့ ဂရုဏာတှေ မလြော့အောငျ သခြောလုပျပါ ။ ဘယျလောကျပဲ သေးမှားတဲ့အရာတှဖွေဈပါစေ အသိအမှတျပွုပါ ။ အဲဒီ အရညျအသှေးကို ထိနျးသိမျးနိုငျရငျ ပွညျ့စုံတဲ့ ဘဝတဈခု မငျးရရှိလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့သားမှတျထားရမှာက ငါက မငျးရဲ့ အကောငျးဆုံး သူငယျခငျြး ဖွဈမှာပါ။ အဖေ သားကို နှလုံးသားတဈခုလုံးနဲ့ခဈြတယျ Noah. ❤️❤️❤️ ” ဟုဆိုပွီး မှေးနဆေု့တောငျးပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ..။
သရုပျဆောငျ ဇာဏျခီကတော့ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးရငျသှေးလေးကို ဆုံးရှုံးသှားပွီးနောကျ ဒုတိယအကွိမျ အခှငျ့အရေးရရှိခဲ့တဲ့ သားလေး နိုဝါကို အသကျထကျတောငျ ပိုခဈြရှာသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ နိုဝါလေးလညျး မှေးနကေ့စ ပြျောရှငျမှုတှရေရှိပွီး ဖဖေေ၊ မမေေ အားကိုးထိုကျတဲ့ သားလိမ်မာလေးတဈယောကျ ဖွဈလာပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ လို့ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျ..။
ချစ်သူသက်တမ်း (၅) နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးနဲ့ ဖြိုးလေး